Khudbadihii taariikhda galay ee ugu saameynta iyo hadal haynta badnaa ee Xasan Cali Kheyre | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Khudbadihii taariikhda galay ee ugu saameynta iyo hadal haynta badnaa ee Xasan...
Khudbadihii taariikhda galay ee ugu saameynta iyo hadal haynta badnaa ee Xasan Cali Kheyre
Xorriya Online: Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa waxaa uu caan ku ahaa khubado soo jiidsasho leh oo inta badan hadal hayn ka noqday baraha ay bulshada ku wada xiriirto, isagoo si gaar ah khudbadhiisa ugu isticmali jiray inuu dhallinyarada kula hadlo.
Waxaa la sheegay in xasan Cali Kheyre uu wakhti badan gelin jiray diyaarinta khudbadihiisa marka uu la hadlaya shacabka gaar ahaan dhallinyarada.
Kheyre ayaa noqday mid ka mid ah shaqsiyada loogu mutaabacayn badanyahay madaxda Soomaalida, iyada oo aad loogu fiirsado, lagana falceliyo waxyaabaha uu fagaarayaasha kusoo bandhigo haddii ay ahaan lahayd qaabka uu hadalada u jeediyo, labiskiisa, iyo ficiladiisa kale.
Waxaase iyana dhanka kale jirtey dood ah in khayre uu mararka qaar soo min guuriyay khudbado ay jeediyeen madax kale oo dunida ah sida Obama.
Waxaana dhawr jeer baraha bulshada isbarbardhiga hadal uu jeediyey oo meel kale ka jeedinayo siyaasi kale. Taas oo ahayd eedaha waaweyn ee loo hayey.
Waxaa tusaale loosoo qaatay in uu minguuriyay hadalo ay jeediyeen madaxweynayaashii hore ee John F. Kennedy iyo madax kale.
Waxaa aad baraha bulshada loogu faafiyay muuqaal isbarbardhig ku samaynaya hadalkii caan baxay ee Kennedy uu jeediyay ee ahaa “Ha is weeydiin waxa ay dowladda Maraykanka kuu qaban karto, ee isweeydii waxa aad u qaban karto dowladda Maraykanka”.
Kheyre ayaa xigashadan ka sheegay socdaal uu ku marayo gobolada dhexe.
“Markaan fiiriyay, hadalkiisana gudaha usii galay ma ahan wax isaga kasoo maaxday, waxaanan fahmay in hadalkiisa uu yahay minguuris” ayuu yiri Cabdisitaar Xasan Cali, oo aqoon u leh arrimaha baraha bulshada.
Balse, dadka taageero Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in ay adag tahay in la is barbar-dhigo maadaamma qeyb yar oo ka mid ah khudbadda Kheyre, ay in yar isaga egyihiin khudbadda caanka ahayd ee uu jeediyay madaxweynihii hore ee Maraykanka.
Waxaan halkan idin kula wadaageynaa qaar ka mid ah khubadihii Xassan Cali Kheyre ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu jeediyay.
1 Dalka inaan dhibaateyn
Xassan oo jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Qadar uga warbixinayay waxa ay xukumadisu kaga ka duwan tahay kuwii ka horeeyay ayaa yiri: “Aniga iyo madaxweynaha waxaan isla garanay ka hor inta aanan dalka wax u qaban inaan dalka dhibaateynin, taasi waxa uu micneheedu yahay inaan aniga iyo madaxweynaha jeexano siyaasad ah inaan aniga iyo isaga ka madax-bannaanahay musuq-maasuqa, ka madax-bannaanay qabyaaladda iyo nin jecelaysiga, ka madax-bannaahay in shisheeye na iibsan karaan, noona sheegi karaan go’aanka aan dalkeena u gaareyno, ka madax-banaanahay in milyan ama labo ama saddex ama boqolaal milyan nalaku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhalin-yarada soo koraya.”
Xassan Cali Kheyre oo u muuqday in uu u jawaabayo dadka siyaasadda kaga soo horjeeda ayaa isla khudbadaasi ka yiri “waxaan idin ballan qaadayaa inta aan xukunka joogno inaannaan yeeli doonin in nala cabsiiyo oo dariiqa saxda ah nalaga leexiyo, in nala yiraahdo nala shaqaysta ama waan idinka ridaynaa xukunka, inta aan madaxda nahay, anigoo ku hadlaayo kayga iyo kan madaxweynaha, sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqableyaal, waxaan ka raadineynaa shacabka Soomaaliyeed.”
2: Ammaanta magaalooyinka Somaaliya
Xassan Cali kheyre waxaa booqasho ku tagay maagaalooyin badan oo Soomaaliya ku yaalla, waxa ayna khudbadahaasi caan ku yihiin salaanta iyo hordhaca. Waxa uu magaalo-kasto ku ammaanayay kheyraadka gaarka ah ay u leedaaday iyo waxa ay ku wanaagsan tahay.
Dabyaaqadii sanadii 2019-kii ayuu Xasan Cali Kheyre socdaal ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa uu khubadiisa ku bilaabay salaanta afka mayga “reer Baydhabo janaay, siin salaami, Nabadaa, Hergelaa bariidaa, sida suurada leh ha iin dhawaayteen, reer Baydhabo Janaay siin hilaawi Isin hilaawteena, reer Koonfur galbeel inii iswaraysana inkooyi”
Khudbadda Reysal wazaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa aad u dheereyd sagoo meel fagaaro ah kula hadlayey shacabka Koonfur Galbeed.
3: Khudbaddii Macsalaameynta: Tii ugu saameynta badanayn
Khudbadaha kale ee saamaynta leh waxaa ka mid ah khudbaddii uu jeediyey habeenkii u danbaysay ee uu Khayre banneeyey xilka wasiirka koobaad ee dalka. Waxay ahayd khudbad aad loo sugayey maadama maalintaa gelinkeedii hore ay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonidii kala noqdeen isaga iyo xukuumaddiisaba, arrintaas oo madmadow badan abuurtay.
Raysalwasaare Khayre oo marka xilka laga qaadayey ku maqnaa Dhuusamarreeb ayaa ka soo duulay galabnimadii, waxana uu xilli danbe habeennimadii jeediyey khudbadiisii u danbeeysey ee macasalaamaynta.
Waxaana lagu xasuustaa kalmadihii hadalhaynta badan ee dhinaca baraha bulshada abuurtay ee ahayd: ‘anigoo og’ isagaa Khayre khudbaddiisa dhowrjeer kusoo celceliyey ereygaas. Habeenkaas oo inkastoo Baarlamaanka sheegeen inay xilkii ka qaadeen, isagu dhankiisa waxa uu sheegay in uu is casilay.
Hadalladiisa waxaa ka mid ahaa “Anigoo og in wixii maanta ka dhacay baarlamaanka iney sharci darro ahaayeen, aan loo marin hab-raacii saxda ahaa xil-kaqaadis xukuumadeed.”
“Anigoo og inaanay ku jirin agendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codeyn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, hadana waxaan go’aansaday in umadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan umadda Soomaaliyeed u hayay aigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban bur-bur iyo dhibaato si aan ugu turo shacba Soomaaliyeed, qeybna aan uga noqon khal-khal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca mid dhaqaale, mid amni iyo mid bulshaba ayaan sida umada soomaaliyeed igu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin xukun ee aan u joogay inaan shacabka soomaaliyeed u adeego.”
Khudbaddaas oo markii muuqaalkeedii lagu soo baahiyey bogga baraha bulshada ee Xasan Cali Khayre ayaa kumanan kun oo qof ay taageera u muujiyeen.
Hadal jeedinta waa mid ka mid ah xirfadaha ugu waaweyn ee madaxda u horseedi kara in ay kasbadaan kalsoonida shacabka, islamarkaasna uga dhaadhiciyaan hadba waxa ay doonayaan, oo ay ka mid tahay in la doorto.
Waa xirfad jaamacadaha iyo mac-hadyada lagu barto, buugaag badane laga qorey, sidaasi darteedna la yaab ma leh in madax badan oo waqtigan casriga ah jooga ay ku wanaagsanyihiin jeedinta khudbadaha marka ay taaganyihiin fagaarayaasha ay dadka badan isugu yimaadaan.